अनुशासित र संस्कारपूर्ण शिक्षा - Pradesh Today अनुशासित र संस्कारपूर्ण शिक्षा - Pradesh Today
बैशाख २३, २०७६ उमा भण्डारी
अहिले नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको छ । शिक्षण संस्थाहरुले शैक्षिक सत्रलाई विशेष रुपमा लिने गर्दछन् । आफ्नो शैक्षिक संस्थालाई अब्वल बनाउने र गुणस्तरीय शिक्षा दिने प्रतिवद्धता सार्वजनिक भइरहेका छन् । नयाँ शैक्षिक सत्र र विद्यालयको सुधारको योजनाको बारेमा डिभाईन टेम्पल एकाडेमी तुलसीपुर–६, दाङका प्रिन्सिपल भोजराज न्यौपाने सँग गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेप ।
नयाँ शैक्षिक सत्रको सुरुवातलाई कसरी सञ्चालन गर्नुभएको छ ?
नयाँ शैक्षिक सत्रको शुरुवातसँगै भर्ना सञ्चालन र कक्षा सञ्चालन गरेका छौँ । यो बर्ष हामीले डिभाइन टेम्पलको लगानी बर्षको रुपमा लिएका छौँ । भर्खर हामीले नयाँ स्कुल बस लियौँ र आफ्नो सेवा क्षेत्र बिस्तार ग¥यौँ ।
स्कुल भवनको निर्माण कार्य सुरु गरिसकेका छौँ । गत बर्षदेखि कक्षा ११ सञ्चालन गरेका थियौँ, यो बर्ष कक्षा १२ सञ्चालन गर्ने छौँ । कक्षा ११ र १२ एवं मन्टेश्वरी कक्षालाई अझै ब्यवस्थापन गर्दै स्कुललाई तुलसीपुर क्षेत्र कै उत्कृष्ट स्कुलको रुपमा अगाडि लैजाने योजना बनाएका छौँ ।
आगामी दिनहरुमा हामी हाम्रो विद्यालयलाई Resource full स्कुलको रुपमा लैजाने योजनामा छौँ । साथै हरेक क्षेत्रबाट उत्कृष्ट बनाउँदै लैजाने तयारी गरेका छौँ ।
विद्यालयप्रति विद्यार्थीको आकर्षण हो वा विद्यार्थीप्रतिको आश्वासन ?
हामी जे गर्छौँ त्यो मात्रै बोल्छौ । त्यसैले आश्वासनका त कुरै भएन । डिभाईन टेम्पल एकाडेमीले यस क्षेत्रमा पारेको राम्रो प्रभाव के हो ? भनेर हेर्ने अभिभावकहरुले आफ्ना नानीबाबुहरुलाई हाम्रोमा भर्ना गर्नुभएको छ ।
हामीले सिकाउने संस्कार, अनुशासन, संस्कृतिप्रतिको उत्तरदायित्व, पठन संस्कृति, हामीले गरेको खेलकुद, अतिरिक्त क्रियाकलाप, विद्यार्थीलाई सिकाउने नेतृङ्खवको कुरालगायत स्कुलकोSoftwareर Hardware कै कारण अभिभावकहरुले आफ्ना नानीबाबुहरुलाई हाम्रो स्कुलमा ल्याउनु हुन्छ ।
अरु विद्यालयभन्दा डिभाईनमा के फरक छ ?
सरसर्ती हेर्दा उस्तै लाग्ला तर धेरै भिन्नता छन् । विद्यार्थीलाई A+ बनाउन हामीले वातावरण पनि तA+कै बनाउनु प¥यो नि । भनिन्छ नि कि Great people do not do different things but they do diffently. । हामीले विद्यार्थीहरु फरक ढङबाट हेर्छौ । हरेक विद्यार्थीले केही न केही सम्भावना बोकेर आएको हुन्छ ।
हो त्यो सम्भावना के छ भनेर हामीले खोजी गर्छौ । र उसलाई सोही क्षेत्रमै अगाडि लैजाने प्रयत्न गर्छौ । र उ सफल हुन्छ । हेर्दा कक्षाकोठा उस्तै होलान्, विद्यार्थी उस्तै देखिएलान तर भित्रीरुपमा हामी अन्य भन्दा फरक छौँ ।
विद्यार्थीहरुमा संस्कार र व्यवहारिकता हराएर गयो भन्छन् नि के छ ?
तपाईंले जुन प्रश्न जोड्नु भो हामी त्यसमै लागि रहेका छौँ । ब्यवहारिक र संस्कारिक शिक्षा वास्तवमै अहिलेको आवश्यकता हो । विद्यार्थीले हामीबाट बढी सिकाए बढी सिक्छन । कम सिकाए कम सिक्छन् ।
त्यसैले शुरुमा हामी अनुशासित र व्यवहारिक हुन अति आवश्यक छ । हामी आफू अनुशासित र संस्कारपूर्ण तरीकाले समूहमा काम गर्नुको साथै विद्यार्थीहरुलाई सोहि अनुसार पढाउने गयौँ भने मात्र हामीले चाहेको गुणस्तर प्राप्त गर्न सक्छौँ ।
अहिले विद्यालय–विद्यालयबीचमा तिव्र प्रतिस्पर्धा देखिन्छ नि ?
हामी यो हावादारी प्रतिस्पर्धामा हामी छैनाँै । आफूले राम्रो गर्ने हो भने अन्य विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गर्न हामी आवश्यक ठान्दैनाँै । हाम्रा क्रियाकलापहरु र गतिविधिहरु आम अभिभावकहरुले देखिरहनुभएको हुन्छ ।
हामी उहाँहरुलाई उच्चस्तरको शिक्षा दिन्छौँ । कुन स्कुल कुन तह र स्तरमा छ ? त्यो जाँच गर्ने अभिभावकहरुले, तपाईहरु जस्तै स्वतन्त्र ब्यक्तिहरुले गर्ने हो ।
विद्यार्थीहरुका लागि अतिरिक्त क्रियाकलापहरु सञ्चालन हुन्छन् कि हुँदैनन् ?
नेपाल सरकारबाट मान्यता र स्वीकृत प्राप्त पाठ्यक्रम लागूगरेका छौँ । न्याय हुने गरी पाठ्यपुस्तक छनौट गरेका छौँ । शुक्रबार एवं विशेष दिनमा अतिरिक्त क्रियाकलापहरु गराउँदै विद्यार्थीहरुको शारीरिक, मानसिक र बौद्धिक विकास हुने गतिविधि सञ्चालन गर्ने गरेका छौँ ।
के अभिभावक र विद्यार्थी विद्यालयप्रति सन्तुष्ट छन् त ?
सन्तुष्ट नहुने त कुरै भएन । हामीले १२ बर्ष पहिले स्कुल सञ्चालन गर्दा ५० जना विद्यार्थीबाट गरेका थियौँ र आज आएर त्यो संख्या सात सयभन्दा बढी हुनुको तथ्यांकले उहाँहरु खुशी भएको र विद्यालयप्रति सन्तुष्ट रहेको देखिन्छ ।
हामी अभिभावकहरुसँग नियमित सम्पर्कमा रहन्छौँ । विद्यालयलाई के कसरी सञ्चालन गर्ने ? भन्ने विषयमा अभिभावकहरुले हामीलाई आवश्यक पर्ने सल्लाह, सुझाव दिनुहुन्छ । सोहि अनुसार हामी अगाडी बढ्ने गर्छौ । जसका कारण आफूहरु विद्यालयप्रति खुशी भएको बताउने गर्नुहुन्छ ।
विद्यालयले उत्पादन गरेका विद्यार्थीहरु समाजमा टिक्न र बिक्न सक्ने छन् कि छैनन् ?
हामी दशौँ बर्ष पार गरेर ११औँ बर्षमा प्रवेश गर्दैगर्दा जम्मा चारवटा एसईई ब्याच बाहिर पठाएका छौँ । ती हाम्रा विद्यार्थीहरुले आ–आफ्नो क्षेत्रमा केही गरिरहेका छन् । एकजना डाक्टर पढिरहेका छन् । केहिले इन्जिनियरिङ गरिरहेका छन्,
केहिले वि.एस्सी.एजी र केहिले बि.एस्सी फोरेस्ट्री एवं केहि नानीहरुले नर्सिङ गरिरहेका छन् । केही छात्रवृत्तिमा उच्च शिक्षा लिन विदेशसम्म पनि गएका छन् । केही शिक्षा पेसामा आएका छन् । छोटो समयमा नै विद्यार्थीहरुले राम्रो अग्रसरतामा लिएको देखिन्छ । उनीहरु यो परिवेशमा टिक्न र बिक्न कुनै समस्या हुने छैन ।
विद्यालयहरुमा विकृति देखिएको छ भन्छन् नि के हो ?
हुन सक्छ कुनै स्कुलमा तर हाम्रो डिभाइन टेम्पल एकाडेमीमा कुनै विकृति छैन । अनुशासन र संस्कार सिकाउन सकियो भने विकृति आउँदैन ।
विद्यालय प्रविधियुक्त छ की छैन ?
हामीले अनुमति र स्वीकृति पाएको पाठ्यक्रम साधारणतर्फको स्कुलको हो । प्राविधिक र प्रविधीयुक्त पाठ्यक्रमको अनुमति र स्वीकृति अहिले निजी स्कुललाई दिइएको छैन ।
तर Panif/struggle for existence निजी स्कुलले आफ्नै Co- curriculum बनाएर कम्प्युटर र टेक्नोलोजी सम्बन्धी कक्षाहरु सञ्चालन गरेका छौँ । हामिले ल्यापटप ल्याबटा इन्टरनेटको सदुपयोग एवं उपयोगबाट स्कुलमा ई–लाइबे्ररी, विदेशी विद्यार्थीसँग Cultural exchange programहरु गर्न र गराउन सक्षम भएका छौँ ।
विभिन्न ठाउँको अध्ययन र अवलोकन र फिल्ड भिजिटबाट पनि प्रविधितर्फको ज्ञान सीप सिकाएका छौँ । समय अनुकूल विद्यार्थीहरुलाई प्रविधि र प्राविधिक कुरा सिक्ने वातावरण दिएका छौँ ।
स्थापना कालदेखि अहिलेसम्म विद्यालय सञ्चालनमा आएका चुनौती र समस्याहरु के कस्ता रहेका छन् ?
विद्यालयले यहाँसम्म सञ्चालन गर्दै गर्दा धेरै समस्या र चुनौतीहरु नआएका होइनन् । समयसँगै हामीले तिनको गहन अध्ययन गरेर समाधानहरु गर्दै आइरहेका छौँ ।
सुरुका दिनहरु कक्षा अनुमति र स्वीकृति एवं भौतिक पूर्वाधारको समस्या हुन्थ्यो भने अहिले आएर योग्य शिक्षकको अभाव हुने, राज्यले लिने दोहोरो कर प्रणाली, यातायात ब्यवस्थापनका कुराहरु कहिलेकाहीँ समस्या भएर आउँछन् ।
अन्त्यमा भन्नु पर्ने केही ?
अन्त्यमा सम्पूर्ण अभिभावक, शुभचिन्तक, समाजसेवी, बुद्धिजीवि एवं पाठकहरुलाई नयाँ वर्ष २०७६ को हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु । यदि राम्रो स्कुलको खोजीमा हुनुहुन्छ भने आउनुहोस् डिभाईन टेम्पल एकाडेमीलाई तपाईंले खोजे जस्तै र विद्यार्थीले रोजेजस्तै स्कुल बनाएका छौँ । हामी सबै मिलेर हरेक विद्यार्थीको भविष्य उज्ज्वल बनाउनु छ ।
आउनुहोस् हातेमालो गरौँ र यो तुलसीपुर क्षेत्रकै शिक्षालाई उत्कृष्ट बनाऊ । यस्तै मलाई केही कुरा राख्ने महङ्खवपूर्ण समय र अवसर दिनु भएकोमा प्रदेश टुडे परिवारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । धन्यवाद !
क्वारेन्टाइनमा नै विवाह
महायज्ञ सफल पार्न भेटघाट र अन्तरक्रियाथत